Oggansaa fi Deeggarsa - Sheer Itiyoophiyaa
Oggansaa fi Deeggarsa
Oggansi bu’aa qabeessi fi deeggarsi daldalaa hojiiwwan guyyaa guyyaanii keenya gaggeessuu irratti kaampaanii keenyaa baay’isee barbaachisaa dha. Oggantoonni keenya baay’een isaanii naannoodhumatti baratanii kan leenji’anii dha. Qonnawwan Sheerii Ogeessotii ogummaawwan Agronomii, Faayinaansii, Humna namaa, IT, Bittaa , Seera fi waliigaltee, Qunnamtii hawaasummaa fi qunnamtiiwwan, ijaarsa fi Eegumsa irratti hojii ni kenna/qacara
Hojjettoota keenya waliin qunnamaa
Salamoon Mulugeetaa /Teknishaana IT (ogeessa kaastuu ashaaraa fuulaa fi qubaa )
Ani waggootii 8 duran hojjechuu jalqabe.
Ani jalqabumarraa kaasee kanan ani qacarame teknishaanummaa IT dhaan yoo ta’u sirni IT baay’ee walxaxaa ta’aa dhufan illee, ammallee oggommaa kanumarrattan hojjechaa jira. Isa kanatu hojicha hawwachiisaa isa taasisa.
Sheer Itiyoophiyaan dhaabbata baay’ee guddaa fi addunyaa irratti beekamaa waan ta’eef qaamolee qooda fudhattoota baay’ee waliinan walitti dhufeenya qaba.
Ergan gara Sheeriitti galeen boodaa ani waan baay’ee baradhee jira. Gyyaan tokkoon tokkoon ishee adda kan taate dha. Yeroo hunda piroojektoota haarawaa qabna. Itti gaafatamummaawwan natti kennaman ofii koon qindeessuu qindeessuu kootiif natti dhaga’ama.
Buzee Girmaa / Ogganaa/Hogganaa sadarkeessaa olaanaa
Bara 2009 irraa kaaseen Sheer Itiyoophiyaa keessa hojjechaa jira.
Ani barreessituu waan hir’inaa ta’een jalqabe. Kanaan booda to’attuu ajajaa ta’ee hojjedhee fi kanaan booda to’attuu sadarkaa qulqullinaa ta’een hojjedhe. Amma ani gochaalee sadarkeessuu sararawwan(sadarkeessuu) hunda hogganaan jira.
Seenaan duubaa barnoota koo fi fedhiin koo qonna irratti. kanaafan ani Sheer Itiyoophiyaaf hojjechuuf fedhii koo ta’e
Ati maaliif namoonni biroo Sheer Itiyoophiyaa keessa akka hojjetan gorsitaa??
Muuxannoo ofii kootii irraa ka’uudhan namni tokko jabaatee hojjechuun qabeenya horachuu barbaade, kaampaaniin kun ittigaafatamummaawwan baay’ee paartiilee lamaanuu fayyaduu danda’an kennuuf fedhii qaba.
Read all about Makaanikaalaa fi Elektirikaalaa